Manomboka Amin’ny Ampongamaro Sy Ny Dihy Ny ‘Karnavalin’ny Firenena’ ao Arzantina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2014 14:32 GMT
Vakio amin'ny teny Aymara, English, বাংলা, русский, Español
[Ny rohy rehetra dia amin'ny teny espaniola ankoatra izay marihana manokana.]
An-dalana ny fetiben'ny Karnavalin'i Arzantina malaza indrindra – nomena anaram-bositra “Ny Karnavalin'ny Firenena” – ao an-tanànan'i Gualeguaychú ao amin'ny faritanin'i Entre Rios, eo amin'ny 230 kilometatra avy ao an-drenivohitra Buenos Aires.
Ao amin'ny Notas de un Viaje Particular i Cheryl nizara ny anarany:
…Tao anatin'ny gadon'ampongamaro, hafaliana ary loko no nanombohan'ny “Karnavalin'ny Firenena”, ny zava-dehibe indrindra ao Arzantina, nankalazaina tao Gualeguzychú, Entre Ríos. Lanonana mora miely io, izay nanampoka ny maro tamin'ireo fiara mahavalalanina, vatana misy sokitra ary tsiky tsy mety tapitra, tsy mitsahatra ny mandihy sy mankalaza ny olona…
Voarara Ny Karnavaly [en] nandritra ny fitondrana jadona tao Arzantina, saingy tsy tena nijanona mihitsy izany tany amin'ny tanàna zatra ny fotoan'ny fety. Isan-taona, manaitra i Gualeguaychú tamin'ny fanatontosana ny Karnavaly ao amin'ny corsódromo, toeram-pihaonana fanaovana Karnavaly izay nasolo ny fampiasana ny lalana.
Mpizahatany an'arivony no mandefa mivantana handray anjara ny andiany tamin'ity fotoana ity, izay nanomboka tamin'ny 4 Janoary 2014. Tontosaina isaky ny Asabotsy ny hetsika mandra-pahatonga ny andro voalohany amin'ny volana Marsa.
Ny bilaogy El Vestidito Negro namoaka ny sarin’ny Karnavaly tamin'ny 2012:
Saripika avy amin'ny bilaogy El Vestidito Negro navoaka indray tamin'ny lisansa Creative Commons (CC BY-ND 3.0)
Saripika avy amin'ny bilaogy El Vestidito Negro navoaka indray noho ny lisansa Creative Commons (CC BY-ND 3.0)
Revolución Media nizara ny lahatsarin'izay hatolotra amin'ny Karnavaly amin'ity taona ity:
Toy izany koa i Gabo por el mundo namoaka ny fantin-tsary ary nizara tolo-kevitra amin'ny fomba andehanana any Gualeguaychú sy ny toerana azo ipetrahana.
Ao amin'ny bilaogin-tsariny i Amelia McGoldrick namoaka andian-tsary, tsy ny sarin'ny Karnavaly ihany fa ny sary amin'ny maha-mpizahatany azy ao an-tanàna.
Saingy, niteraka fitarainana avy amin'ny manodidina ihany koa ny Karnavaly noho ny korontana avelan'ny mpanatrika. Nanazava i El Dia OnLine:
Foiben'ny fanalanandro sy ny sitrapon'ny olona 90.000 izay manjaka amin'ny tanàna ny arabe. Ara-bakinteny tsy misy olona intsony, saingy mbola te-ho any hatrany ny olona sy ny fiara maro.
Saingy raha miteny hoe sitrapo isika dia zary mampiasa voambolana mety matanjaka faneno ve, sa noho ny fahatsapan'ny mpifanolo-bodirindrindra maro izay nisafidy ny hikaton-trano, sa ho an'ireo izay manam-bintana kokoa ka miala vonjimaika amin'ny toerana manintona mpizahatany ka misitraka ny fandriampahalemana sy ny fangonana any amin'ny faritra hafa ao amin'ny tanàna.
Fa efa nanomboka ny lanonana ary efa vonona amin'ny ampongamaro, dihy ary ny hatsarana manaitaitra ireo tarika conga “comparsas“, ary vonona hianoka taonan'ny “Karnavalin'ny Firenena” koa ny mpizahatany.
Video YouTube avy amin'i 3KTodoNoticias